DAAWO VIDEO:XOG Yaa Awood Badan Turkiga Iyo Israel ,Isbar Bardhig… | Marqaan News Agency
DAAWO VIDEO:XOG Yaa Awood Badan Turkiga Iyo Israel ,Isbar Bardhig…
Published on December 12, 2017 by mar · 1 Comment
Su’aashani waa mid wajiyo iyo fasiraad badan leh ee aan si qudh ah looga jawaabin karin, sababta oo ah awoodaha ayaa sii kala duwan.
Sidaas oo ay tahay, Israa’iil ma aha dalkaa yar ee Falastiin dhulka ka haysta oo qudh ah ee waa dalal dhowr ah. Israa’iisha dhabta ahi waa USA. In USA iyo Turkiya uu haddeer dagaal dhex maro cidi na xisaabta oogu ma jirto oo waa dhalanteed.
Hase ahaato ee, awoodda saxda ah ee ay muuminiintu wax ku yihiin waa Kitaabka Alle SWT iyo Sunnaha Rasuulka SCW oo ay si dhab ah ugu dhaqmaan oo isku na dhaqaan, taasi na casrigan aakhiru zamanka ah ee aynu ku sugannahay malahaygu ma aha in ay suuroobi karto.
Maadaama aynu aakhiru zamanka ku jirno, is ma lihi waxaa jirta Islaamnimo ka macquulsan in uu midkeen ba ku dadaalo in uu haleelo nolol yar oo uu cibaadadiisa ku ilaashado ee uu aadmiga kale na kaga kaaftoomo.